တရုတ်နိုင်ငံသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲလေယာဉ်များ၊ ရထားများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | တရုတ်နိုင်ငံ, လမ်းပြ, အာရှခရီးသွားခြင်း
အခါအားလျော်စွာ တရုတ်သည်အာရှတိုက်သို့ ဦး တည်နေဆဲဖြစ်သည် မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်။
၎င်းသည်ခရီးစဉ်များနှင့်တစ် ဦး တည်းသောစွန့်စားမှုများအတွက်စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောခရီးစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုခွင့်ပြုသည့်ခရီးသွားစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မြေပုံကိုကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားပြီးဝေးကွာသောတိုင်းပြည်ကိုတွေ့ရသည်။ မရလို့လား။ ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်! ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိရန်သာဖြစ်နိုင်သည် ...
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်သင်ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အသက် ၅၀ ကျော်ခရီးသွားအုပ်စုများမှရွေးချယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်သင်၌ရှိသည်။
ဘေဂျင်းနောက်ဆုံးခရီးနှင့်အတူနိုင်ငံတကာအပျော်စီးသင်္ဘောများ Tianjin ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ရှိ အရှေ့တောင်အာရှတစ်ဝှမ်းလုံးမှဟောင်ကောင်မှဖြစ်သည်။ ရှန်ဟိုင်းနှင့်မြို့တော်ကိုယ်တိုင်ပြီးနောက်, Jin က သူတို့ကဒီမြို့ကိုမကြာခဏပြောသလို၊ ဒီဟာကအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး၊
ဥရောပအဆောက်အအုံများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံများ၊ နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ မဟုတ်ဘဲနှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ (အနီးနားရှိ Great Wall ဖြတ်သန်းမှု၊ Huangyaguan Pass) နှင့်အရသာရှိပြီးကြွယ်ဝသော gastronomy ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ တော်ဝင် ကာရစ်ဘီယံ Tianjin သို့အလည်အပတ်ခရီး။ အ သံယောဇဉ် of အ Beဥပမာသည်။ ဟောင်ကောင်မှထွက်ခွာသောသင်္ဘောများရှိပါသည် သို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားမည့်ခရီးစဉ်များကိုပင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်နာမည်ကျော်တရုတ်မင်းသမီး Fan Bingbing သည်ဤသင်္ဘော၏နတ်မိခင်ဖြစ်သည်၊ သင်ကလေယာဉ်ပျံတွေမဟုတ်ဘဲလှေတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားကိုလှည့်ပတ်သွားနိုင်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ), စူပါဇိမ်ခံလှေ၌တည်၏။
၎င်းသည်အသုံးအများဆုံး option ဖြစ်သည် တံခါး ၀ င်တံခါးများသည်များသောအားဖြင့်ပေကျင်းသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လည်းအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများမှရောက်ရှိလာမှကြွလာသောအခါရှန်ဟိုင်း။
ဤ«တံခါးများအကြားကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရန်မှာဟောင်ကောင်ဖြစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ဗီဇာသက်တမ်းရှည်တယ်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ၎င်းသည်ကောင်းစွာတည်ရှိသည် ပုံမှန်ကျောပိုးအိတ်ခရီးသွားများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်မှာ၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးယေဘုယျအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုပေးသည်။
သငျသညျပြီးသားကမ္ဘာ၏ဤအပိုငျးပတ်ပတ်လည်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် သင်ကုန်းလမ်းဖြင့်ချဉ်းကပ်ပြီးနေရာများစွာမှနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည် တရုတ်အတွက်သိသိသာသာကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှသင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဖြတ်ကူးနိုင်သည် Karakoram နှင့်ရ Kashgarရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာ။ ဤသည်မှာပါကစ္စတန်၏အခြေအနေနှင့်ဤဒေသရှိမွတ်စ်လင်မ်လူနည်းစုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြconsideringနာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။
လာအိုမှသည် Boten ကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်သည် Menglaယူနန်ပြည်နယ်။ အဘို့နီပေါကနေ တိဗက်သိသာထင်ရှားတဲ့သူဗီဇာနှင့်အထူးပါမစ်၏ပြissueနာတစ်ခုလုံးကိုမှတ်မိပေမယ့်။ ဗီယက်နမ်ကနေ မတူညီတဲ့ရွေးချယ်မှုသုံးခုရှိတယ် -
နန်ကျင်းသို့ချစ်ကြည်ရေး Pass ကိုအဘို့
လာအို Cai မှ Kumning အထိဖြစ်သည်
Mong Cai မှ Dongxing အထိ
စျေးအသက်သာဆုံးကူးသည်ပထမဖြစ်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းက Dong Dang ကိုညဘတ်စကားနဲ့သွားလို့ရပြီးကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာ Friendship Pass ကိုသွားဖို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေးလို့ပဲ။ မင်းချစ်သူ ဂွမ် တရုတ်ဘာသာဖြင့် o ဟူး ငီ Quan ဗီယက်နမ်။
ဒီမှာနယ်စပ်ကိုနံနက် ၇ နာရီတွင်ဖွင့်သည်, ည4နာရီအထိ။ တစ်ချိန်ကတရုတ်ဘက်သို့သင်လမ်းမကြီးပေါ်သို့လမ်းမကြီးပေါ်လျှောက်သွားပြီး ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာရှိပင်ညွန့်သို့ဘတ်စ်ကားစောင့်နေသည်။ သင်နန်နင်သို့သွားသောပုံမှန်ဘတ်စ်ကားများစီးနိုင်သည့်နေရာမှဖြစ်သည်။ Guilin ကနောက်ထပ်တစ်ညဘတ်စ်ကားစီးပြီးသွားသည်။
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာယူရန်ဖြစ်သည် ဟနွိုင်းမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်သောကြာနေ့ ၂ နာရီတွင်ထွက်ခွာပြီးနှစ်ရက်အကြာညနေ ၅ နာရီတွင်ပေကျင်းသို့ရောက်ရှိသည်။ ညသန်းခေါင်မှာ Pianxing၊ နံနက် ၈:၄၀ နာရီ၊ Guilin ည ၇:၂၀ မှာရောက်တယ်။ ဟုတ်တယ် ပိုမိုရိုးရှင်းသော်လည်း ပို၍ စျေးကြီးသည်ဟုတ်တယ်၊
ဒုတိယရွေးစရာတွင်ဒေသဆိုင်ရာညရထားကို Lao Cai သို့သွားပြီးနယ်စပ်ကို ဖြတ်၍ ကူမင်းမှ Hekou သို့ရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးထပ်စီး။ သွားပါ။ ဟနွိုင်းမြို့မှသောကြာနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြေးဆွဲနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ည ၉း၃၀ တွင်ထွက်ခွာပြီးကူမင်းမြောက်ဘူတာသို့နံနက် ၇:၂၅ နာရီတွင်ရောက်ရှိသည်။
ရထား၏စကားပြောလူကြိုက်များခြင်းနှင့်လှပသော ဆိုက်ဘေးရီးယားရထားသို့မဟုတ် Trans-မွန်ဂို ဒါကြောင့်လည်းတစ်ခု option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖြစ်လိမ့်မည် en ကာဇက်စတန် သငျသညျမှАлматыမှကူးနိုင်ပါတယ် ယူရူမီ o Yiningတရုတ်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောကြောင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရခြင်းမှာပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်မှုများတွင်မြင်ကြလိမ့်မည်အဖြစ် ယခင်ကတရုတ်နှင့်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများအကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကိုကားလမ်းသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်ပြုလုပ်သည် ဒီတော့ ဘတ်စ်ကားတွေအများကြီးရှိတယ် ကြောင်းလွန်းသွား။
အရှေ့ဘက် မှနေ၍ သင်တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်သည် ဗီယက်နမ်နှင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် နှင့်လည်း မြန်မာနှင့်လာအိုမှဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်ကနေ၊ Karakoram Pass နဲ့နီပေါက El Tibet ကတဆင့်ငါတို့ပြောပြီးပြီ။
စိတ်ကိုထားပါ ပွင့်လင်းသောတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့အကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခြင်းမရှိပါ ကောင်းပြီ, နိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေးအခုအချိန်မှာအလွန်ကောင်းသောအခြေအနေများ၌မရှိကြပေ။ နေ့ရောညပါဘတ်စကားတွေအကြောင်းအမြဲပြောပေမယ့် ... သင်ကားမောင်းနိုင်ပါသလား?
အမှန်တရားမှာယေဘူယျထင်မြင်ချက်များသည်ထိုအချက်ကိုအလေးအနက်ဖော်ပြသည် ဒါဟာအတန်ငယ်အန္တရာယ်များနှင့်အထင်အမြင်မှားစေသည် ကားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရန် အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးဘာသာစကားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိရှိခဲ့လျှင်။ ဒီမှာပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားလည်အောင်လုပ်တာဟာငရဲဖြစ်နိုင်တယ်။
ထို့အပြင်ကားဖြင့်အကောင်းဆုံး ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးအလွန်အေးသောနေရာဖြစ်သော El Tibet မှဖြစ်သည်။ မင်းအဲဒီလိုခံစားနေရတုန်းပဲလား ထိုအခါသင်သိသင့်ပါတယ် နီပေါနိုင်ငံကမင်းတို့နယ်စပ်ကကားတစ်စီးကိုဖြတ်ကူးနိုင်တယ် Kodari နှင့် Zhang muသည်းခံခြင်းဖြင့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
သင်လည်းကားဖြင့်ဝင်နိုင် မြန်မာနိုင်ငံမှ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနိုင်ရန်အတွက်ဗီဇာနှင့်ကားစာရွက်များနှင့်အတူ။ The သင့်နိုင်ငံမှကားမောင်းခွင့်၊ တရုတ်အစိုးရမှထုတ်ပေးသောယာယီပါမစ်နှင့်နိုင်ငံတကာပါမစ်, လိုလိုမယ်မယ်။
ထိုသို့စိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည် သင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကားမောင်းနိုင်သော်လည်းသင်၏ခရီးကိုကြိုတင်အသိပေးရမည်။ တရုတ်မှာ နိုင်ငံခြားသားများသည်အချို့သောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်သာမောင်းနှင်နိုင်သည် ဒါဆိုမင်းတို့အစီအစဉ်တွေရှိရင်သံရုံးမှာရှိတဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » တရုတ်နိုင်ငံ » တရုတ်နိုင်ငံသို့မည်သို့ရောက်နိုင်မည်နည်းလေယာဉ်များ၊ ရထားများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ
Luis rene ဟုသူကပြောသည်
luis rene မှစာပြန်ရန်